Ny fampiharana 10 lalana fitsangantsanganana maimaim-poana tsara indrindra | Androidsis
Ny fampiharana 10 fitsangantsanganana maimaim-poana maimaim-poana
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android
Tamin'ny taon-dasa niaraka tamin'ny areti-mandringana misy fampiharana fitsangatsanganana an-tongotra maro izay nitombo be amin'ny isan'ny mpampiasa. Indrindra noho ny faniriana ny ho afaka hivoaka amin'ny habaka izay manome ny natiora traikefa feno ary tsy nisy olona marobe.
Efa eto amintsika ny toetrandro tsara, ka maro ny olona no manararaotra izany handany fotoana bebe kokoa any ivelany. Ny fitsangatsangana dia hetsika iray izay nanjary nalaza nandritra ny taona maro dia maro ny olona no nanao fanazaran-tena. Ny findaintsika Android dia afaka manampy betsaka amin'ity lafiny ity raha ny dia an-tongotra. Misaotra amin'ny fampiharana isan-karazany.
Amin'izany no ahafahantsika manomana ny làlanay na manampy be dia be fotsiny izy ireo raha sendra mitsidika natiora ianao. Ka, Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'n'ity fisafidianana rindranasa Android ity.
1 Fanentanana an-kalamanjana: fitsangatsangana, bisikileta, GPS ary sarintany
2 AllTrails: Fihetsiketsehana mandeha amin'ny dia lavitra
5 Velombelomy hatrany
7 Ampahatsiahivo ny misotro rano
8 Boky Torolàlana ho an'ny Survivor ivelan'ny daholobe
9 Compass Smart / Compass
Fanentanana an-kalamanjana: fitsangatsangana, bisikileta, GPS ary sarintany
Voalohany indrindra, tsy maintsy lazaina fa io ny fampiharana dia izay no ViewRanger, fampiharana tsara ho an'ny fitsangatsangana sy bisikileta izay ananantsika ankehitriny miaraka amin'ny Outdooractive ary manolo-kevitra an-karihary izahay fa ho ilay fampiharana hahitana làlana vaovao.
Anisan'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny sarintany an-tsary ofisialy, izay ahafahantsika mahafantatra ny tsy fitovian'ny tany; ny Ny mpandahatra làlan-tsaina intuitive, ary avy amin'ny kitika iray dia ahafahantsika manao làlana ipso facto miaraka amin'ny fampahalalana mifandraika rehetra sy ny mombamomba ny toerana ambony; sari-tany vector, miaraka amin'ny antsipiriany sarobidy rehetra ilainay; ary na dia ny fahaizana afaka manoratra làlana hamela ny dian-tsoratra voarakitra haka andro hafa aza.
Marina fa mandray am-po tokoa ny zava-misy ity app ity ary miteraka traikefa lehibe amin'ny làlana hitondrana azy ireo ary hahita na dia ireo vaovao aza. Mety tsy ho akaiky an'i Wikiloc amin'ny isan'ny mpampiasa azy, saingy safidy hafa lehibe ny fiheverana an'io fitsangatsanganana sy fahitana faritra vaovao io ahafahantsika manadio ny saintsika, miaina rivotra madio ary mankafy ny hakanton'ny tontolo manodidina antsika maro.
Tsy azontsika atao koa ny tsy miraharaha an'izany na ny manafatra sy manondrana data GPS aza na mamorona làlanao manokana amin'ireo làlana naleha mba hanampiana sary, famaritana ary hizarana izany amin'ny fiarahamonina Outdooractive. Raha fintinina, fampiharana fitsangatsanganana mahafinaritra izay tsy azonao adino.
Developer: AG miasa ivelan'ny trano
AllTrails: Fihetsiketsehana mandeha amin'ny dia lavitra
iray hafa fampiharana tena mitovy amin'ny Outdooractive ary mamela antsika hiditra amin'ny làlana 100.000 manerana an'izao tontolo izao. Izany hoe, raha Wikiloc no tonga lafatra ho an'ny firenentsika, ny AllTrails dia manana fanatrehana lehibe manerantany ho an'ny rindrambaiko boribory tsara amin'ny ambaratonga rehetra.
Rindrambaiko tsara natao tamin'ny traikefan'ny mpampiasa ary ahafahantsika mahita ireo làlan'ny mpampiasa hafa ireo, tahaka ny ahafahantsika mampakatra ireo noforoninay. Hevitra 45.000 XNUMX mahery Io no fanamafisana lehibe an'ity fampiharana ity izay amporisihinay noho ny fahombiazan'ny fiasa sy ny tanjona amin'ny fampianarana antsika lalana ary koa filokana amin'ny karazana fanatanjahantena hafa toy ny bisikileta.
Izy io koa dia manana sarintany topografika, zotra GR, zotra trekking, ary koa sarintany ivelan'ny Internet na tsy misy fifandraisana GPS hahafahantsika misintona ny findaintsika na dia any amin'ny faritra lavitra izay tsy ahafahantsika mifandray mihitsy aza amin'ireo angona. Ny teboka iray manohana azy dia ny lisitr'ireo angon-drakitra rehetra izay arosony hanaraka ny fivoarantsika ary hahafantatra raha mivoatra amin'ny fotoana na amin'ny kilometatra isika, na dia marina aza fa miaraka amin'ity karazana fampiharana ity izay ankafizintsika dia ny làlana mihoatra ny manao haingana kokoa amin'ny fotoana izy io. Na izany na tsy izany dia manana ny angon-drakitra izahay handraisana ny fanombanana tadiavinay.
AllTrails dia manolotra famandrihana premium miaraka amin'ireo fiasa fanampiny ireo:
Fampitandremana "tsy mandeha amin'ny lalana"
Sarin-tsarintany ho an'ny zotra
Developer: AllTrails, LLC
Izany no Fampiharana fitsangatsanganana an-tongotra sy fampiasa amin'ny lalana. Tamin'ny fahavaratra lasa teo, izany hoe tamin'ny 2020, rehefa nanomboka niparitaka toy ny sombin-javatra teo amin'ireo mpampiasa maro izay te hahalala làlana vaovao na niditra an-tsehatra fotsiny tamin'ity fitsangatsanganana ity. Nihatsara hatramin'ny nisian'ny kinova voalohany hanomezana traikefa ho an'ny mpampiasa tsaratsara kokoa.
Ankoatra ny mifantoka amin'ny fitsangatsangana, mamela karazana fampiharana 75 karazana fanatanjahan-tena i Wikiloc manomboka amin'ny hazakazaka, bisikileta na MTB ka hatramin'ny kayak, ski ary ny hafa. Ny asany lehibe indrindra dia ny fahalalana ny làlan'ny mpampiasa hafa ary ireo dia nomena isa ary naneho hevitra momba ny hafa, mba hahalalana hoe iza no tsara indrindra na be mpitety faritra.
Mazava ho azy koa mamela anao hanoratra làlana amin'ny sari-tany mba hanisy fomba fijery, raiso ny sarin'ilay zotram-panatanterahana rehefa mandehandeha izahay ary mampakatra izany any amin'ny kaontinay mba hampahafantaran'ny zotra sisa fa tsy ho very izy ireo.
Ny antsipirian'ny sarintany topografika ihany koa dia tsy ampy hahalala ny fanamaivanana ary ny fiakaran'ny haavony ary tsy toy ny fampiharana hafa dia azontsika atao ny misintona ireo sarintany ireo hampiasana azy ireo ivelan'ny Internet. Eny marina fa mandeha matetika i Wikiloc tsara kokoa rehefa mandalo ny traikefanao premium izahay ary ao anatin'izany ny tombony rehetra:
Fampandrenesana feo hahafantarana raha miala amin'ny làlana voafantina ianao
Fanaraha-maso mivantana hahafahanao mizara ny làlana amin'izay tianao, ary hahafantaran'izy ireo momba anao amin'ny fotoana rehetra
Alefaso amin'ny Garmin na GPS Suunto anao: azonao atao ny misintona ny làlan'ny Wikiloc mivantana amin'ireo fitaovana ireo hiaraka aminao
Mikaroha amin'ny faritra fitaterana: azonao atao ny mitady làlana misimisy kokoa izay mandalo ireo faritra nofidinao
Sivana fikarohana farany
Raha fintinina, fampiharana làlana tsara ary nahavita nametraka an'ity karazana fampiharana ity tamin'ny tsatokazo nanomboka tamin'ny taon-dasa. Marina fa tsy manana zavatra toy ny lohahevitra maizina izy io, saingy vetivety dia tsy nanome bebe kokoa ny ekipa nahazo tombony ho fanampiny hahafahany manome traikefa mpampiasa tsara kokoa.
Os mamporisika anao izahay hifindra amin'ny famandrihana isam-bolana, satria eo no ahitana ny votoatin'ny rindrambaiko rehetra antsoina hoe Wikiloc, noforonina teto amin'ny firenentsika ary tokony hanohana ny fampiasana azy isika. Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny rohy etsy ambany.
Fikarohana GPS ivelan'ny pejy Wikiloc
Developer: Wikiloc ivelany
iray hafa fampiharana fitsangantsanganana ary koa ho an'ny fanatanjahan-tena hafa toy ny bisikileta. Raha ny marina dia manana safidy premium ihany koa izy toy ny fandoavana sarintany manerantany hahafahana mampiasa azy ireo ivelan'ny finday. Manana ny vidiny 30 euro izy ireo ary hanome anao tombony bebe kokoa noho ny miavaka.
Manana izany fanazaran-tena ara-panatanjahantena rehetra izany ka miankina amin'ny zavatra azontsika atao amin'ny bisikileta an-tendrombohitra ho an'ny zotra vonona amin'ity karazana bisikileta ity na handeha hitsangatsangana. Fampiharana iray izay nomena tsara ny interface-ny ary avy amin'ny hevitra an'arivony maro no saika hahatonga azy io ho alaina indrindra eto amin'ity lisitra ity.
Manana fivezivezena am-peo izy io mba tsy ho very ianao raha manao ny làlana, ireo sarintany ivelan'ny Internet, na dia efa nolazainay aza fa raha tianao izany rehetra izany dia mila mamakivaky ilay boaty ianao, ary ny fahaiza-manao fototra an'io karazana fampiharana io dia ny firaketana ny làlana. Azonay atao manokana ireo làlana ireo ho an'ny mpiara-miasa na mampahafantatra azy ireo ampahibemaso mba hahafantaran'ny olona rehetra izany làlana izay fantatrao izany ihany.
ny Ny sarintany ivelan'ny Internet dia manana maody telo:
Faritra voalohany na faritra isam-batan'olona
Fonosana faritra maro
Anisan'ireo fitaovana mifanaraka amin'izany no ahitantsika ireto:
Garmin: Ampifanaraho amin'ny Garmin Connect ny piraofilinao hizaranao ireo zotra halehanao miaraka komoot amin'ny fitaovanao Garmin.
Wahoo- Ho an'ny bisikileta Wahoo ELEMNT na ELEMNT BOLT ary fidio amin'ny làlana mahavariana sy fampifangaroana ireo zotra voarakitra.
Sigma: ho an'ny bisikileta Sigma hanaraka ny làlan-kaleha ary hijery ny halavirana sy ny hafainganam-pandeha amin'ny tena izy avy eo amin'ny tohana.
Bosch: mampifandray komoot amin'ny solo-sainao Kiox na Nyon handraketana ny làlana ary araho ny lalana fitetezana avy amin'ny fitaovanao.
Como hitanao fa efa vita ny asany amin'ny bisikileta, Ka raha mampiasa io karazana fiara io ianao hitrandrahana sy hilalaovana fanatanjahan-tena dia mety ho iray amin'ireo ankafizin'ity fizarana ity.
Komoot - Sarintany: bisikileta sy fitsangantsangana
Developer: komoot GmbH
iray hafa fampiharana alaina erak'izao tontolo izao ary izany dia mitarika antsika amin'ny fampiasana manokana raha manao fanatanjahan-tena any ivelany toy ny bisikileta, mandeha an-tongotra, manao ski ambony ary maro hafa. Iray amin'ireo mampiavaka azy tsara indrindra ny tantaran'ny horonantsary 3D ary ahafahantsika mamadika ny asantsika ho video 3D, manampy ny sarin'ilay zotra, mandinika ireo zava-nisongadina ary mizara ity horonantsary ity ihany amin'ny fampiharana hafatra na tambajotra sosialy.
tolotra fanohanana ireo fampiharana rehetra ireo: Suunto, Garmin Connect, Endomondo, Polar, Apple Health, MapMyRide, MapMyRun, MapMyHike, ary MapMyWalk.
Y afaka manavao ny famandrihana premium anao izahay ho an'ireo safidy rehetra ireo:
Manafatra hetsika taloha ary mamadika azy ireo ho tantara an-tsary
Kalitaon'ny horonan-tsary, ny horonan-tsarinao amin'ny HD.
Amboary ny horonan-tsarinao im-betsaka araka izay itiavanao azy
Fehezo ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary, alefaso amin'ny hafainganana tianao indrindra.
Mozika, ampio mozika amin'ny horonan-tsarinao
Mahazoa laharam-pahamehana, ny mpikambana ao amin'ny Club dia mandray ny horonan-tsarinao Haingankaingana.
Hetsika lava: avereno atao mandritra ny 12 ora mahery ny hetsika
Làlana mifandray: diniho ny pitsopitsony rehetra amin'ny 3D
Velomy: mihazakazaka, mandeha tongotra ary maro hafa
Developer: Mody BV
Ireo no ilay Fampiharana fitsangantsanganana 5 tsara indrindra anananao amin'ny findainao Android hanararaotra ny fotoana ho avy ary hanjavona amin'ireo zotra eny an-tendrombohitra eto amin'ny firenentsika.
Saingy, ho fanampin'izany, mahita rindrambaiko hafa izahay izay hahatonga ny lalan'ny dia an-tongotra ho mahafinaritra sy azo antoka kokoa:
Ity rindranasa ity izay iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ireo tia mandeha an-tongotra. Izy io dia fampiharana izay mahita sarintany topografika marobe amin'ny faritra maro isika an'izao tontolo izao. Manana firenena maro isika amin'ny fampiharana (Espana, Italia, Etazonia ...). Izany dia manampy antsika rehefa mivoaka hijery voajanahary ao amin'ny firenentsika isika na rehefa manao vakansy. Manana karazana sari-tany vitsivitsy amin'ny app isika ary fampahalalana marobe azo. Izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia manana kinova fandoavam-bola aza izahay, ankoatry ny fananana doka ao anatiny.
Developer: CritterMap Software LLC
Ampahatsiahivo ny misotro rano
Faharoa, manana rindranasa izahay izay tsotra tahaka ny ilaina. Satria iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra rehefa mivoaka hizaha natiora isika, indrindra amin'ny toetr'andro, dia ny mitazona rano foana. Saingy amin'ny tranga maro dia tsy misotro rano ampy ianao. Noho izany, ity fampiharana ity dia fanampiana lehibe. Satria ny asany dia tsotra, tsotra hampahatsiahy antsika izany fa tsy maintsy misotro rano isika. Na dia zava-dehibe indrindra aza izany, satria ny hydration no lakile hisorohana ny olana mety hitranga rehefa mandeha mitsangatsangana isika. Azontsika atao ny manamboatra endrika toy ny fahita matetika amin'ny fampahatsiahivana, ny karazana tavoahangy ananantsika ary hahafantatra izay tokony hosotrointsika amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
Fampahatsiahivana fisotro rano - Fanairana sy log
Boky Torolàlana ho an'ny Survivor ivelan'ny daholobe
Ity rindranasa ity dia ho anao mba hamoahana ireo Bear Grylls izay entinao ao aminao raha sendra misy zavatra miseho. Izy io dia fampiharana izay mety ho tena ilaina raha sendra toe-javatra tafahoatra. Amin'ny ankapobeny dia boky feno tokoa izy io miaraka amin'ny vahaolana sy toro-hevitra amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Manomboka amin'ny ratra, hatrany amin'ny fanapoizinana, fitadiavana sakafo na fananganana fialofana. Manana vahaolana sy fampianarana amin'ny karazana toe-javatra samihafa izahay. Inona koa, miasa ny fampiharana tsy misy fifandraisana Internet, ka ahazoana aina tokoa ary tena afaka mampiasa azy isika.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy manana fividianana na dokam-barotra ao anatiny izahay.
Compass Smart / Compass
Telefaona maro mazàna manana iray napetraka amin'ny toerana misy anao, fa raha mila fampiharana izay mandeha tsara amin'ny fotoana rehetra ianao ary manampy anao hahita ny lalanao, ity rindranasa ity no safidy tsara indrindra. Eo anoloan'ny kompà izay hanompo antsika isika sao very. Ho fanampin'izany, azontsika atao ny mampiditra ny fandrindrana ny tanànantsika ao aminy ary manaraka azy ireo any aoriana any hiverina (na ny tanàna akaiky indrindra ny misy antsika). Ny endriny dia tena tsotra sy ahazoana ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza izahay, mba hahazoana asa fanampiny. Saingy tsy ilaina ny mampiasa azy ireo. Ny kinova maimaimpoana dia tena feno sy ilaina amin'ny ilainay.
Kompas: Smart Compass
Developer: Fitaovana Smart co.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 10 fitsangantsanganana maimaim-poana maimaim-poana
Ny fampiharana rakibolana tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana kalkulator siantifika ambony 9 ho an'ny Android